Vavaka ho an'ny Virjin'i Guadalupe. ? Fiarovana, Amparo ary Fahagagana
Vavaka ho an'ny Virjiny avy any Guadalupe manandratra amim-pinoana sy avy ao am-po amin'ny fihetsika manetry tena izay manambara ny fahatsapana fa ny fon'ny olombelona dia mangataka fanampiana amin'ny zavona ara-panahy.
Na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana fotoana handalovantsika io fotoana io, ny vavaka dia atao hivavahan'ny olona sahirana.
Tsy misy tsy azo atao rehefa mandray ny vavaka ho fitaovana iadiana amin'ny ady izay atolotry ny mandeha isan'andro.
Afaka manontany izay ilaintsika isika, eny fa na ireo zavatra izay lasa nofinofy sy faniriantsika aza ary mbola mijanona ao anaty fanahintsika ary tsy misy mahalala afa-tsy isika.
1 Vavaka ho an'ny Valan'i Guadalupe Iza ilay Virijin'i Guadalupe?
1.1 Vavaky ny Virjin'i Guadalupe ho fiarovana
1.2 Vavaka hangataka fiarovana ho an'ny Virjin'i Guadalupe
1.3 Vavaky ny vavahadin'i Guadalupe hangataka fahagagana
Vavaka ho an'ny Virijin'i Guadalupe Iza ilay virjin'i Guadalupe?
Izany dia fisehoan'ny Virjin'i Maria Virjiny tamin'ny 1531 tany Mexico.
Fantatra fa ny voalohany nahita azy dia ilay Indiana Juan Diego teo am-pizahana.
Izany dia milaza ny tantara izay nangatahin'ilay virjiny hanangana tempoly ary handefasana hafatra amin'ireo olona rehetra azo atao manomboka amin'ny eveka.
Nanao izany ny Indiana Juan Diego, izay rehetra nankinina taminy, dia tsy mora izany satria tsy nisy nino azy satria, toy ny fahagagana rehetra, dia mila mahita famantarana fa marina ny voalazan'i India.
storia izay nangatahin'ilay virjiny mba hanorina tempoly ary izany mampita hafatra amin'ny olona rehetra azo atao manomboka amin'ny eveka.
Nanao izany ilay Indiana Juan Diego, ny zava-drehetra nankinina taminy dia tsy mora izany satria tsy nisy nino azy satria, toa ny fahagagana rehetra, nilaina ny fahitana famantarana sasany fa marina izay nolazain'io karana io.
Mahazo torolàlana vaovao avy amin'ny Virijiny ny Indiana izay nanankinana azy mba hikaroka ny raozy izay eo an-tampon'ny tendrombohitra, dia nankato indray ny filaminana izy ary nitady raozy vaovao mba hanolorany azy ireo amin'ny eveka nofonosina bodofotsy. Rehefa latsaka amin'ny lamba firakotra ny raozy dia hita taratra ilay sary fantatra ankehitriny hoe Virjin'i Guadalupe.
Androany, ny basilica an'i Santa María de Guadalupe dia lasa tempoly ara-pivavahana be mpitsidika indrindra eto an-tany.
Tombanana eo amin'ny paroasy roapolo tapitrisa tonga isan-taona izy ireo hilaza ny finoany sy hanomezana voninahitra an'io Virjiny mahagaga io.
Vavaky ny Virjin'i Guadalupe ho fiarovana
Bevavy malalany any Guadalupe, Renin'Andriamnitra, Ramatoa ary Reninay. Avia aty hiankohoka eo alohan ny sarinao masina izay navelanao anay nitazona ny tilma nataon'i Juan Diego, ho antoka sy hatsaram-panahy ary famindram-po.
Ireo teny nolazainao tamin'i Juan tamim-pitiavana tsy mahomby dia mbola nanako ihany: "Zanako malalako, Juan izay tiako malala sy marefo," raha namirapiratra tamin'ny hatsarana ianao, dia niseho teo imasony teo amin'ny havoana Tepeyac. Ataovy mendrika ny handre ireo teny ireo ihany tao am-ponay izahay.
Eny, ianao no Reninay; Ny Renin'Andriamnitra no reninay, malemy fanahy sy be fangorahana.
Ary mba ho Reninay ary hampiala anay ao ambanin'ny lambam-piarovanao, dia nijanona teo amin'ny endrik'i Guadalupe ianao. Ry Virjiny Masina any Guadalupe, asehoy fa ianao no Reninay.
Arovy izahay amin'ny fakam-panahy, ampionony amin'ny alahelo ary ampio izahay amin'izay ilainay.
Raha ny loza, ny aretina, ny fanenjehana, ny fangirifiriana, ny fandaozana, amin'ny ora hahafatesanay, dia jereo ny mason'ny fangorahana ary aza misaraka aminay.
Maria Virjiny, amin'ny maha-reny tsara azy hainy ny manome fiarovana matanjaka ary marina amin'ireo rehetra manaiky azy ho reny.
Ny manatona azy hitady fiarovana dia fihetsika maneho finoana, be herim-po ary manao ny marina. Afaka mangataka fiarovana isika amin'ny fotoana rehetra ilantsika izany, ho an'ny mpianakavy na namana iray.
Misy mihitsy aza na mampihatra izany vavaka ho an'ny entana ara-nofo sasany, ity lafiny fivavahana ity dia toa toa tsy misy haja loatra kanefa ny reny iray dia mahafantatra ny fomba hikarakarana ny zanany sy ny fananany rehetra.
Tsy afaka manatona ny sainy isika fa tsy afaka manampy antsika fa amin'ny fo misokatra hiresaka amintsika ary hitarika antsika ny zavatra tsy maintsy ataontsika amin'ny fotoana rehetra.
Vavaka hangataka fiarovana ho an'ny Virjin'i Guadalupe
Oh Virijina tsy manam-paharoa, Renin'ilay tena Andriamanitra sy Renin'ny Fiangonana! Ianao, izay avy amin'ity toerana ity dia maneho ny famindram-ponao sy ny fangorahanao amin'ireo rehetra mangataka fiarovana aminao; henoy ny vavaka amam-pahatokisan-tena ataonay sy anoloranao an'i Jesosy Zananao, ilay hany mpanavotra anay.
Renin'ny famindrampo, Tompon'ny sorona miafina sy mangingina aminao, izay mivoaka hihaona amintsika mpanota, dia manokan-tena ho antsika anio ary ny fitiavantsika rehetra.
Manokana ny fiainantsika, ny asantsika, ny fifaliantsika, ny aretina ary ny fanaintainantsika ihany koa isika.
Manome fihavanana, ny rariny ary fanambinana ho an'ny firenentsika; satria izay rehetra ananantsika ary izahay dia eo ambanin'ny fiahianao, Ramatoa sy reninay.
Te ho anao tanteraka izahay ary hiaraka aminao mandeha amin'ny lalan'ny tsy fivadihana amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Fiangonany: aza avela hiala ny tananao be fitiavana.
Virjin'i Guadalupe, Renin'ny Amerikanina, mangataka anao amin'ireo eveka rehetra izahay, hitarika ny olo-mahatoky amin'ny lalan'ny fiainana Kristiana mahery, ny fitiavana sy ny fanompoana feno fanetren-tena amin'Andriamanitra sy ny fanahy.
Saintsaino ity fijinjana lehibe ity, ary miangavy ny Tompo handroso ny hanoanana ho an'ny fahamasinana ao amin'ny Vahoakan'Andriamanitra rehetra, ary hanome feo maro momba ny pretra sy ny finoana, matanjaka amin'ny finoana, ary ireo mpialona amin'ny misterin'ny fisian'Andriamanitra.
fiarovana, care, amor, famelan-keloka ary izay rehetra tadiavinao manontany azy dia vonona ny handrenesany ny sofin'ny zanany.
Ny finoana no fepetra takiana tsy takatry ny saina.
Ny tenin'Andrimanitra dia manazava amintsika izy ireo fa tokony hangataka ny mino isika fa misy, izany hoe, tokony avelatsika ny vavaka ataontsika amin'ny fahafantarana fa nahenoina ary mbola hamaly.
Amparo dia ilaina ary ny iray dia tokony hangataka foana ny hahatsapa ny tsindry ao am-po.
Tsy fantatsika ny ho avy ary izany no antony maha-zava-dehibe an'io vavaka io ny famelana ny drafitra sy ny dingana rehetra izay ho raisintsika.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny vavaky ny vavim-bavak'i Guadalupe.
Enga anie ny fiarovana azy ho eo amin'ny fiainantsika ary ny fitahiany tsy hanary anay sy ny fianakaviantsika sy ny namantsika.
Ny fangatahana fiarovana ho an'ny olona manokana dia fihetsika feno fitiavana, tsy ilaina ny handrehitra labozia na manomana tontolo teo aloha ho an'ity vavaka ity izay mety ho somary tsotra nefa tena mahery, mila mino fotsiny ianao, tsy misy zavatra hafa ilaina akory.
Vavaky ny vavahadin'i Guadalupe hangataka fahagagana
Bevohoka malala any Guadalupe, reny sy vadin'ny firenentsika. Eto ianao dia niondrika tamim-panetren-tena teo anoloan'ilay sarinao mahagaga.
(Apetraho ny baikonao)
Ao aminao no itokisanay ny fanantenanay rehetra. Ianao no fiainanay sy fampiononana.
Tsy matahotra na inona na inona isika raha tsy eo ambanin'ny alokaloka fiarovana.
Ampio izahay amin'ny fivahiniananay eto an-tany ary mifona ho anay eo alohan'ny Zanak'Andriamanitrao amin'ny fotoana FAHAFATESANA, mba hahatratrarantsika ny famonjena mandrakizay ny fanahy.
Ny fahagagana dia ireo zavatra inoantsika fa tsy ho vita amin'ny herin'ny olombelona.
Teny iray izay ampiasaina kokoa amin'ny fangatahana aretina izay, hoy ny siansa medikaly, dia tsy misy fanasitranana.
Na izany aza, ny teny hoe fahagagana dia azo ampiasaina amin'ny toe-javatra maro hafa toy ny amin'ireo tranga izay iandrasantsika ny vola izay tsy ho tonga na rehefa tonga ny fianakavian'ny fianakaviana iray izay nijaly ary indray mandeha dia miseho milamina ary tsy mihetsika.
Teo amin'ny halaviran'ny vavaka ny fahagagana ary milaza finoana kely fotsiny izy. Tsy misy tsy azo atao.
Azonao atao ny mivavaka ary mitaky ny vavaka rehetra ho an'ny olona masina.
Ny zava-dehibe dia ny vavaky ny Virjin'i Guadalupe dia nivavaka niaraka tamin'ny finoana be sy be dia be tao am-pony.
Tianao kokoa ny mino ny tena herin'ity olo-masina ity ary mila mino ianao fa hanampy anao izy.